एक सातापछि नेप्से १५ सय विन्दुभन्दा माथि | गृहपृष्ठ
Home लगानी एक सातापछि नेप्से १५ सय विन्दुभन्दा माथि
एक सातापछि नेप्से १५ सय विन्दुभन्दा माथि
कुल बजार पूँजीकरण १७ खर्ब ५९ अर्ब
कात्तिक २७, काठमाडौं । मङ्गवार नेप्से एक सातापछि १ हजार ५ सय १६ दशमलव शून्य २ विन्दुमा पुगेको छ । कारोबार शुरु भएदेखि बढेको बजार दुई घण्टाको अवधिपछि १ हजार ५ सय २१ दशमलव ८१ विन्दुमा पुगेको थियो । तर अन्त्यसम्म सो विन्दुमा टिक्न सकेन । एक साता भित्रमा नेप्से घटेर १ हजार ४ सय ६० दशमलव ७३ विन्दुसम्म पुगेको थियो । नेप्से २५ दशमलव १४ अङ्क बढेर परिसूचक १ दशमलव ६९ प्रतिशत बढेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ६५ कम्पनीको ७ हजार २ सय ८५ पटकको व्यापारमा १८ लाख ४७ हजार ७ सय ५५ कित्ता शेयरको रू. ७५ करोड ११ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा ५ दशमलव ८९ प्रतिशत बढेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण १ दशमलव ६९ प्रतिशत बढेर रू. १७ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १० समूहको परिसूचक बढेपछि नेप्से बढेको हो । माइक्रोफाइनान्सको परिसूचक ३ दशमलव ३६ प्रतिशत बढेको छ । यस समूहमा पर्ने छिमेक लघुवित्त, सिभिल लघुवित्त, किसान माइक्रोफाइनान्स, नँया नेपाल लगाएत सबै माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढेपछि यस समूहको परिसूचक बढेको हो । जलविद्युत कम्पनीको परिसूचक २ दशमलव ९३ प्रतिशत बढेको छ ।
यस समूहमा पर्ने चिलिमे हाइड्रोपावर, हिमालयन पावर पार्टनर, सिनर्जी पावर लगाएत सबै जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य बढेपछि यस समूहको परिसूचक बढेको हो । साथै, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक २ दशमलव ३५ प्रतिशत बढेको छ । यस समूहमा पर्ने हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेडको रू. २१ ले र युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको शेयर मूल्य रू. ९ सय ९९ ले बढेपछि यस समूहको परिसूचक बढेको हो । यस कम्पनीको प्रकाशित भएको पहिलो वित्तीय विवरण नाफा मुलक भएकाले यस कम्पनीले शेयर मूल्य उच्चले बढेको हो ।
यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इन्डेक्स १ दशमलव ५७ प्रतिशत बढेर ३ सय १८ दशमलव ९३ अङ्क पुगेको छ । चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ८ सय ८४ मा रू. ६ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेप्सेमा सबैभन्दा बढी शेयर कारोबार भएका १० कम्पनीमा प्रभु इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर, प्राइम कमर्शियल बैङ्क, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क, एभरेष्ट बैङ्क, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, र सिभिल बैङ्कको रू. १ करोडदेखि ३ करोड ४७ लाखसम्मको शेयर कारोबार भएको छ ।
विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ९ दशमलव ८३ प्रतिशत र कर्णाली डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयर मूल्य ९ दशमलव ६८ प्रतिशत बढेको छ । हाम्रो विकास बैङ्कको शेयर मूल्य ८ दशमलव ५७ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरि, सगरमाथा इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा करीब ६ प्रतिशत घटेको छ । यस कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने सूचना दिएपछि यस कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको हो । प्रभु बैङ्कको संस्थापक शेयरको मूल्य ३ दशमलव ३७ प्रतिशत घटेको छ । यस दिन कारोबार भएका १ सय ६५ कम्पनीमा १ सय ३८ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १५ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, १२ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ४८ दशमलव ९३ स्केलमा रहेको छ । यसले बजार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो ९ दशमलव २ रहेको छ । यसले बजार वुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।